PressReader - Isolezwe: 2017-09-14 - Kushayelwe ihlombe ukuqokwa kukaTshabalala
Kushayelwe ihlombe ukuqokwa kukaTshabalala
Isolezwe - 2017-09-14 - IZINDABA - BONISWA MOHALE
ISAZI somnotho uSolwazi Bonke Dumisa sikushayele ihlombe ukuqokwa koMnuz Sim Tshabalala njengesikhulu esiphezulu sebhange elicebe kunawo wonke e-Afrika ngempahla elinayo, iStandard Bank.
UDumisa uthe ukuqokwa kukaTshabalala ngoLwesibili kukhombisa ngokusobala ukuthi abantu abamnyama basebenza ngokuzikhandla futhi benza umsebenzi oncomekayo ezinkampanini ezinkulu.
“Akumele sisheshe sijabule sizitshele ukuthi ‘Libuyile’ ngoba ukuqokwa kwesikhulu esiphezulu esimnyama akusho ukuthi kuzoba nezinguquko ezinqala,” kusho uDumisa.
Uthe uTshabalala akayena umuntu wokuqala ukuphatha ibhange elikhulu kuleli kwazise uMnuz Sizwe Nxasana wayephethe iFNB ngaphambi kokuyophatha iNational Student Financial Aid Scheme (Nsfas). Uthe uDkt Ruel Khoza ubenguSihlalo webhodi labaqondisi kwaNedbank kodwa azikho izinguquko ezinqala abazilethile. “Ukuqokwa kwezikhulu ezimnyama eziwenza kahle umsebenzi yinto enhle futhi okufanele siyijabulele. Izikhulu ezimnyama zivamise ukusebenzisana nezimhlophe njengoba kwenzeke kuSim ngenxa yokuthi kusekhona lokho ukuthi “abathenjwa kahle ngenxa yobandlululo”. Amasheya akwaStandard Bank ehlelwe yintengo emuva kokumenyezelwa kukaSim, ngoLwesibili,” kusho uDumisa.
Uthe yize amasheya ehliswe nawukuthi inhlangano eklelisa amazwe ngokomnotho izwakalise ukungenami ngomnotho waseNingizimu Afrika kodwa nokuqokwa kukaTshabalala akwamukelwanga kahle yiwo wonke umuntu.
UTshabalala ngumuntu wokuqala omnyama ukuphatha iStandard Bank eneminyaka ewu-154 yasungulwa.
IStandard Bank isebenza emazweni awu-20 e-Afrika. Kudala abantu befuna uTshabalala aphathe ngokuzimela kusukela ngo-2013.
Enkundleni yokuxhumana iTwitter, uNksz Lindiwe Mazibuko owangumholi weDA ePhalamende uthe: “Simfisela okuhle kodwa uSim Tshabalala esikhundleni sakhe,”
UThabo Molefe, odume ngelikaTbo Touch, uthe bekuwukumbukela phansi uTshabalala ukuthi enze umsebenzi wakhe nomunye umuntu ekubeni ekwazi kahle akwenzayo.
UNgqongqoshe woMnyango weziMali, uMnuz Malusi Gigaba, uthe ukuqokwa kukaTshabalala kukhombisa ngokusobala ukuthi abantu abamnyama bayakwazi ukwenza umsebenzi osezingeni eliphezulu yize kumthathe iminyaka emine ukuthi aqokwe njengesikhulu esizimele.
UMengameli wenhlangano yosomabhizinisi abamnyama abaphethe izinkampani ezinkulu iBlack Management Forum (BMF), uMnuz Mncane Mthunzi, uthe bayajabula ukuthi iStandard Bank ihlonipha ithalente elimnyama.
Isithombe: LEON LESTRADE
HALALA kubafundi beSolezwe asebeziwinele amaselula akwaBoost Mobile. Abasesithombeni uMnuz Bheka Mchunu waseNdwedwe (ngakwesokudla), ohaleliselwa u-Andiswa Siwela osebenza ophikweni lwezokukhangisa kwiSolezwe. Omunye owinile ongekho esithombeni uMnuz...
Isithombe: SIMPHIWE MBOKAZI
ISIKHULU esiphezulu sakwaStandard Bank, uMnuz Tshabalala, ujatshulelwe ngokuqokelwa kulesi sikhundla azosiphatha yedwa emuva kokusebenzisana nozakwabo omhlophe iminyaka emine